Ny fanasitranana tsara indrindra indrindra dia ny fahamendrehan'ny trano mitokana - ny endrika Gizhu
Home / Interior design / Ny fanasitranana tsara indrindra indrindra dia ny fahamendrehan'ny trano mitokana - ny endrika Gizhu
2021 / 05 / 26 FisokajianaInterior design 7159 0
▲ Landscape no sary mahafinaritra manasitrana indrindra ｜ Li Di
Ny tranon'ny fanasitranana
Avy any ambony ka hatrany ambany, avy any ivelany ka hatrany anatiny.
Mazava ho an'ny maso ary mangina amin'ny fo.
Izany dia hatsaran-tarehy tonon, mitady hatsarana voajanahary sy mirindra, misy, tsotra, mangina, tsy manelingelina, nefa be dia be. Ny fahatoniana miafina dia avy amin'ny fahatokisana lalina ao anatiny, ary ao ambadiky ny fisolokiana dia ny fahendrena amin'ny fandeferana sy ny fihetsika tsy miraika.
Ny tompon'ity tranga ity dia miaro ny fomba fiainana tsotra sy milamina ary tsy tiany ho tsy mahaliana toy ny efitrano modely ny trano. Ny trano eo imasony: milamina sy milamina, madio sy madio.
▲ antsipiriany momba ny fanaka malefaka Sary ｜ Li Di
Misy loko afaka mamihina ny zava-drehetra ary mahatonga ny fiainana ho lasa mahaliana sy mihetsika. Fahamendrehana tsy manam-potoana, fameperana sy fitehirizana, mitaona manintona tsy manam-paharoa. Hatsaran-tsary an'ohatra izay maneho tsara ny fahaizan'ny fotoana. Ny hatsaran'ny zavakanto ankehitriny, ny tsiro ny hafanana sy ny hakantony.
Ny toe-po madio dia mamela ny fotoana hidiran'ny tompona sasatra ao amin'ny efitrano, azony atao ny mamoaka ny enta-mavesatry ny sainy, mahazo aina ary mankafy am-pitoniana ny hatsarana sy ny fanasitranana ity filaminana ity.
▲ Ny hazavana voajanahary, sary manasitrana fotoana Photo Li Di
▲ Ny antsipiriany momba ny fanaka malefaka Sary ｜ Lee Dee
Ny varavarankely fitaratra hatreny amin'ny valindrihana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fianarana misokatra dia natao hitondrana ny mason'ny renirano ao anatiny, ary tsy misy haingon-trano tsara tarehy tahaka ilay nomen'ny natiora. Eto, tsy ilaina ny minia mamolavola azy, fa efa kanto amin'ny fo. Ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany, ny lohataona, ny fahavaratra, ny fararano ary ny ririnina, ny toerana rehetra jerena dia entina ao an-trano. Ny tompona mipetraka amin'ny hatsarana dia faly tokoa.
Photo Sary an'ny efitra fandraisam-bahiny ｜ Li Di
Ny famoahana hazavana sy aloka, miaraka amin'ny solomaso hahatsapana ny filaminan'ny filaminana amin'ny habaka ankapobeny, dia mihoatra ny fahafaham-po amin'ny haavon'ny fitaovana. Ankoatry ny fanarahana ny estetika kanto, ny fikatsahana sy ny fanamafisam-peo ny fotokevitra ara-panahy, dia raisina ihany koa ny fitambaran'ny hatsarana kanto sy ny fanahy tatsinanana.
Ny mpamorona dia nanizingizina foana ny fisainana filozofika famolavolana, ny hatsarana farany. Ny hatsaran-tarehy dia tsy mila aseho harehareha, ny miverina amin'ny fotony no fototr'aina. Home, dia vondrom-piarahamonina misy haja amam-boninahitra sy fihenan-tena tsy voafehy. Ny kanto izay tsy lany andro, ny lova kilasika izay tsy nilaozan'ny fotoana.
Study Fianarana misokatra ny efitrano fandraisam-bahiny ｜ Li Di
Manisy tononkalo kely amin'ny efitrano fisakafoanana ny fanaovana pirinty sy manasa lamba, izay mampiseho fisainana zavakanto tsy azo ovaina. Fifandonana amin'ny fahatsapana sy filamatra, fahatsiarovan-tena ary tsy fahatsiarovan-tena. Betsaka ny sedimentation lalina ao ambadiky ny famoronana an'ity pirinty ity, ny fanombohana madio indrindra, ny feo madio indrindra, tsy misy fihetsika mihoampampana.
Ny mazava malefaka sy fotsy madio ary ny hazo mafana. Ny toerana rehetra dia miafina tanteraka amin'ny antsipiriany mahafatifaty, miaraka amina karazana fiangaliana afaka mahatohitra ny famolavolan'ny fotoana.
Photo Sary ao amin'ny efitra fisakafoana ｜ Li Di
Ny hazavana sy alokaloka malefaka sy tsotra dia maneho toe-java-kanto kanto. Ny hazavana dia mamorona toerana honenana estetika tena milay, mampiadana, milamina ary milamina. Eto isika dia afaka mankafy fanjakana milamina sy milamina, misokatra sy foana, milamina ary milamina, toa ny mangina sy malefaka ihany koa ny fomba fijerintsika. Ny endrika toy izany no fanajana lehibe indrindra amin'ny fiainana, madio sy madio tanteraka ny zava-drehetra toy ny hoe teraka ny zaza.
Room Efitra fisakafoana ｜ Horonantsary momba ny tetikasa
Ny efitrano fisakafoanana sy ny baran'ny nosy afovoany dia azo zahana tanteraka, ary ny lavarangana lalimoara vita amin'ny gorodona misy sisiny feno fantsom-pifandraisana avo dia mahafeno ny filan'ny kabine fisakafoana rehetra. Io dia ahafahan'ny tompon-trano mametraka fifandraisana amin'ny zanany sy ny fianakaviany eo am-panomanana akora.
▲ Faritra fanatanjahantena Sary ｜ Lee Dee
Photo Sarin-tohatra ｜ Lidi
▲ Ny mavitrika amin'ny efitrano fidiovana anatiny amin'ny efitrano fandrianan'ny tompony, ny fampiasana an-habakabaka sary Photo Lidi
Ny rihana faharoa dia tsy manana toerana ampy hihaonana amin'ny asan'ny efitra fisoloana akanjo sy ao amin'ny efitrano fidiovana anatiny sy ivelany, fa hanamorana ny fampiasana ny zaza sy ny ray aman-dreny amin'ny rihana faharoa. Ny rihana voalohany amin'ilay trano dia natao hampiasaina ho trano fidiovana.
View Hizaha ny efitrano fatoriana Master Photo ▲ Li Di
Mety ny rivotra, marina ny masoandro, ary marina ny fandriam-pahalemana. Madio sy madio izy io, voajanahary ary tsotra, toy ny zazavavy kely izay maneho ny hakantony sy ny fahatanorana. Mila tara-masoandro ny fiainana. Amin'ny santimetatra toradroa dia kanto sy milamina tokoa ny zava-drehetra.
▲ Ny hatsaran'ny filentehan'ny masoandro dia mendrika ny tany Sary ｜ Li Di
Rehefa manjavona tsikelikely eo amin'ny tsipika marindrano ny filentehan'ny masoandro, ny hazavana sy ny alokaloka malefaka sy tsotra dia alentika ao anaty toe-tsaina marefo. Ao amin'ny toerana mahafinaritra amin'ny ony tsara tarehy mirotsaka amin'ny fahamorana sy filaminana, ankafizo ity filentehan'ny masoandro mahafinaritra indrindra mipaka amin'ny tany ity. Ny filentehan'ny masoandro dia hiseho amin'ny endriny samihafa mandritra ny taona. Ity shimmer manaitra ity dia matetika no hadinon'ny olona any amin'ny tanàna be olona.
▲ Ny hatsaran'ny filentehan'ny masoandro dia tsy tokony hohadinoina eto an-tany Sary ｜ Lidi
Tsy misy haingon-trano tena tsara tarehy amin'ity tranga ity, fa ny varavarankely mangarahara sy mamirapiratra dia fefy voajanahary, mandoko ny hakanton'ny fotoana sy ny fahasambaran'ny fotoana.
Anaran'ny tetikasa: Toerana mazava sy mangina ho an'ny maso sy ny fo
Adiresin'ny tetikasa: Wenzhou, Sina
Orinasa mpamorona: Qizhu Space
Famolavolana lohan-kevitra lehibe: Huang Qizheng, Huang Xiaoying
Ekipa mpamorona: Liao Yu, Wu Li
Fotoana famolavolana: aprily 2019
Daty fanomanana: Mey 2020
Faritra tetik'asa: 188 ㎡
Fitaovana lehibe: gorodona hazo terebinta, vita vita amin'ny hazo, loko kanto, marbra, tontonana vato
Fampisehoana sary: ​​Li Di
Huang Qizheng Huang Xiaoying
Hatramin'ny nananganana azy, ny Qizhu Space Design dia nanarona ny sehatry ny maritrano, ny trano fonenana, ny birao ary ny varotra. Ny sanganasa dia mampita ny kolontsaina tatsinanana ankehitriny sy mandika ny tena dikan'ny habaka amin'ny filozofia voajanahary. Mifantoka amin'ny maha-olombelona, ​​fihetsem-po ary zavakanto, dia mamantatra ny niandohan'ny olona, ​​ny zavatra ary ny habaka isika ary manohy manapaka ny lamina voajanahary amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny natiora, mampiseho hery famoronana tsy manam-paharoa sy ankehitriny. Nahazo loka sy voninahitra maro ny sangan'asanay avy amin'ny fifaninanana anatiny sy iraisam-pirenena, toa ny A 'Design Award (Italia), Prize Jury manokana an'ny APDC Asia Pacific Design Competition, PI Design Award (Amerika Avaratra), ary ny APDC SPACE WIZARDS 2020.
Previous :: Drafitra efitrano fisakafoanana malaza 80 izay manazava ny aingam-panahin'ny endrika! Next: Skandinavianina mifangaro amin'ny fomban'ny Sinoa, Suède 87m2 Mizara Trano Fankalazana!
2021 / 08 / 15 5716
2021 / 08 / 15 6282
2021 / 08 / 15 6066
2021 / 08 / 14 5780
2021 / 08 / 14 6317
2021 / 08 / 14 5487